The Atkins Diet - Sakafo avela fa tsy avela | Nutri Diet
Sergio Gallego | | fahasalamana
Ny fihinana Atkins dia iray amin'ireo sakafo mampihena be mpahalala sy fanta-daza indrindra izay misy ary misy ny fanaovana sakafo ambany gliosida. Ireo miaro an'ity sakafo ity dia manamafy fa ilay olona manapa-kevitra hanaraka ity drafitra ity dia afaka manavesatra mihinana ny proteinina sy ny tavy rehetra tadiavinao, raha toa ka misoroka ny sakafo misy gliosida betsaka.
Fikarohana marobe no nampiseho fa ny sakafo fihinana gliosida ambany tena mandaitra izy ireo raha ny fahaverezan'ny lanja ary tsy mampidi-doza lehibe amin'ny fahasalamana.
Ny sakafo Atkins dia noforonin'i Dr. Robert C Atkins tamin'ny 1972, rehefa nanapa-kevitra ny hamoaka boky nampanantenainy izy manavesatra manaraka andian-torolàlana ary misy valiny farany mahagaga. Nanomboka tamin'io fotoana io dia lasa iray amin'ireo izy fisakafoanana malaza indrindra manerana an'izao tontolo izao mandraka androany.
Ny atetika momba ny sakafo atkins
Tamin'ny voalohany, ity sakafo ity dia notsikerain'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana tamin'io fotoana io, satria nampiroborobo ny fihinanana Matavy voky. Ny fandinihana natao taty aoriana dia naneho fa ny tavy tavy dia tsy manimba velively fahasalaman'ny olona.
Voaporofo fa ny lakilen'ny fahombiazana amin'ny sakafo mampihena ny lanjany dia ambany gliosida Satria ny fihinanana proteinina bebe kokoa dia mahafa-po ny filan'ny nofo ilay olona ary farany mihinana be dia be kaloria kely kokoa izay manampy ny fihenan-danja tadiavina.
1 Ny dingana 4 amin'ny sakafo Altkins
2 Sakafo tokony hialana amin'ny sakafon'ny Atkins
3 Sakafo azonao ihinana soa aman-tsara amin'ny sakafo atkins
4 Misotro amin'ny sakafo Atkins
5 Sakafo mahazatra mandritra ny herinandro amin'ny sakafo Atkins
Ny dingana 4 amin'ny sakafo Altkins
Ny fihinana Atkins malaza dia mizara ho dingana 4 miavaka:
Ny dingana fampidirana: Amin'ireo andro voalohan'ity drafitry ny sakafo ity dia tokony hihinana kely noho ny Gliosida 20 grama isan'andro mandritra ny 2 herinandro eo ho eo. Afaka mihinana sakafo be tavy, proteinina ary legioma maintso ianao. Amin'ity dingana ity dia resy ianao lanja be.
Ny dingana mandanjalanja: Amin'ity dingana ity dia ampiana tsikelikely izy ireo karazan-tsakafo hafa mamelona ny vatana. Azonao atao ny mihinana voanjo, legioma karbaona ambany ary voankazo kely.
Ny dingana fanitsiana: Amin'ity dingana ity dia tena akaiky hahatratra ilay olona ny lanjanao mety amin'izay ianao afaka manampy gliosida betsaka amin'ny sakafonao ary miadana fihenan-danja.
Ny dingana fikojakojana: Amin'ity dingana farany ity dia afaka mihinana ilay olona ny gliosida izay ilain'ny vatanao nefa tsy mila lanja.
Mandingana ny olona sasany izay manaraka an'io karazan-tsakafo io ny dingana fampidirana tanteraka ary misafidy ny hampiditra voankazo sy legioma be dia be ao anaty sakafo. Ity safidy sakafo ity dia mandaitra amin'ny fanatanterahana azy ny tanjona tadiavina. Mifanohitra amin'izany no izy, ny olon-kafa misafidy ny hijanona amin'ny dingana fampidirana mandritra ny fotoana tsy voafetra, dia malaza fantatra amin'ny anarana hoe ny sakafo ketogenika na ambany gliosida be.
Sakafo tokony hialana amin'ny sakafon'ny Atkins
Misy sakafo maromaro tokony hisoroka ny sakafo ianao mandritra ny sakafo atkins:
Izay karazana siramamy izay ahitana zava-pisotro mahery, vatomamy, gilasy na ranom-boankazo.
Tsy misy hanina voamadinika toy ny varimbazaha, rojo na vary.
ny menaka legioma toy ny soja na katsaka dia voarara tanteraka.
voankazo miaraka amin'ny gliosida avo lenta toy ny akondro, paoma, voasary na poars.
ny legioma toy ny lentil, sifotra na tsaramaso koa dia esorina amin'ity sakafo ity.
Tsy tokony hialana koa ny starch, koa ny ovy tsy ho afaka hihinana azy ianao.
Sakafo azonao ihinana soa aman-tsara amin'ny sakafo atkins
Manaraka izany dia hasiako tsipiriany izay sakafo raha afaka mihinana amin'ity karazana sakafo mampihena ity:
Avela mihinana hena toy ny hen'omby, henan-kisoa, akoho na vorontsiloza.
Trondro sy hazan-dranomasina toy ny salmon, tuna na sardine.
Sakafo mahavelona toy ny ny atody azonao ampidirina amin'ny sakafo io.
Legioma maintso Ampidirina ao koa izy ireo mba hahafahanao manana epinara, broccoli na kale.
Izay karazana voanjo toy ny amandy, ny kennel na ny voatavo dia avela tanteraka.
Sakafo mahasalama ny karazana menaka oliva virjiny fanampiny.
Misotro amin'ny sakafo Atkins
Ny zava-pisotro izay avela amin'ny sakafo Atkins dia toy izao:
Voalohany indrindra Rano, izay tonga lafatra amin'ny fanovozana rano sy fanalana poizina.
kafe Avela izy io satria manankarena antioksida ary tena mahasalama ny vatana.
Zava-pisotro iray hafa tena mahasoa ho an'ny fahasalamana ary avelan'ny sakafo Atkins dia ny dite maitso.
Tokony hisoroka ny zava-pisotro misy anao kosa ianao toaka ary misy gliosida be dia be ao aminy toy ny labiera.
Sakafo mahazatra mandritra ny herinandro amin'ny sakafo Atkins
Manaraka ary raha hazavaiko kokoa, asehoko anao ny ohatra ny amin'ny mety ho famahanana isan-kerinandro amin'ny sakafo Atkins. (Dingana fampidirana)
Alatsinainy: ho an'ny sakafo maraina sasany atody sy legiomaHo an'ny sakafo atoandro salady akoho miaraka amina voanjo vitsivitsy ary ho an'ny sakafo hariva steak misy legioma.
Talata: Atody sy bacon ho an'ny sakafo maraina, akoho ary legioma sisa tavela tamin'ny alina talohan'izay ary tamin'ny alina ho an'ny sakafo antoandro cheeseburger ary legioma
Alarobia: amin'ny sakafo maraina dia afaka mihinana iray ianao omelette miaraka amin'ny legioma, amin'ny sakafo antoandro salady ary amin'ny alina hena voasana miaraka amin'ny legioma.
Alakamisy: Atody sy legioma ho an'ny sakafo maraina, ambiny avy amin'ny sakafo hariva omaly hariva tamin'ny sakafo antoandro ary sakafo hariva salmon misy dibera sy legioma.
Zoma: ny sakafo maraina bacon sy atodyHo an'ny sakafo atoandro, salady akoho miaraka amina kennuts sy hena hena miaraka amin'ny legioma ho an'ny sakafo hariva.
Asabotsy: ho an'ny sakafo maraina omelety misy legioma, sakafo atoandro ny ambin-kena sisa tavela tamin'ny alina talohan'izay ary ho an'ny sakafo hariva henan-kisoa miaraka amin'ny legioma.
Alahady: Atody sy bacon ho an'ny sakafo maraina, henan-kisoa ho an'ny sakafo hariva sy sakafo hariva elatra akoho voatono miaraka amin'ny legioma.
Manantena aho fa efa nanazava ny fisalasalana rehetra momba izany ny sakafo atkins, dia fomba mahasalama sy mandaitra hampihenana lanja sy hanatrarana ny sary irina. Ity misy horonantsary manazava mba hanazavana ny zava-drehetra mazava kokoa momba ny fihinana Atkins.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Ny fihinana Atkins
MARIA VILLAVICENCIO OLARTE dia hoy izy:
Feno fankasitrahana aho noho ny zava-bita nomen'izy ireo ahy momba io sakafo io, kasaiko ampiharina, satria milanja iray metatra sy enina ambin'ny folo santimetatra aho ary milanja enina hetsy zato ary marary aho. Afaka mihinana ny rononon'omby ianao.
Valiny tamin'i MARIA VILLAVICENCIO OLARTE
tsy misy ronono, andramo ny fisorohana ny bacon, na dia azonao atao aza ny mihinana azy dia hampiakatra ny kolesterolao izany, a, raisinao isan'andro fa tsy matetika, afaka manampy ny tenanao ianao amin'ny fakana ranom-boankazo toy ny kristaly maivana sy gelatin tsy misy siramamy ary tsy misy karbôsy, tadidio fa afaka mandray karbôly hatramin'ny 20 grama isan'andro ianao, koa raha misy zavatra manana 1 na 2 grama isaky ny mihinana, dia aza mieritreritra be loatra azy io ary mihinana azy, dia mila ilay fahatsapana fa misotro zavatra mamy ianao. Fantaro amin'ny internet hoe inona ny siram-pisakafoanana azonao raisina sy ny habetsaky ny karbaona ananan'ny ampahany amin'ny sakafo, amporisihiko ianao hividy ilay boky satria eo daholo izany.
MARIA JOSE GONZALEZ SAMPEDRO dia hoy izy:
ny ronono sy ny fromazy dia avela amin'ny sakafo
Valio amin'i MARIA JOSE GONZALEZ SAMPEDRO
rindrina mandoaka wendy dia hoy izy:
Azonao atao ny mihinana zavokà ary ao anatin'ny voankazo ny melon sy papay ary karazana vokatra vita amin'ny ronono sy fromazy azonao hanina, misaotra
Valiny amin'ny rindrina mando wendy
Fomba fanamboarana sarontava fanadiovana an-trano